Snapchat: iwo mutungamiri wekuve nyanzvi mune ino social network | IPhone nhau
Snapchat: iyo giraidhi yekuziva zvese nezve iyo app yenguva yacho
Zvinopfuura zvingangoita kuti munguva pfupi yapfuura wanga uchinzwa zvinopfuura zvakajairika nezvechishamiso chakati. Imwe inomira kunze kwayo inopenya yero uye mweya wayo mune icon. Izvo zvakare zviri mukati menzvimbo dzawakaverenga kana kuudzwa kuti iyi app ndeye vechidiki, ku millenials uye kuti, kana ukasawira mukati meiyo nhanho, zvirinani usayedze kuishandisa (hapana kesi, iro jaya rinotakurwa mukati). Zvirokwazvo, iwe unenge watoona Snapchat kanopfuura kamwe munguva dzichangopfuura nguva, kungave kuburikidza nesocial network, hurukuro neshamwari kana nhau mune dzakasiyana midhiya. Uye hazvishamise, nekuti kufarirwa kwayo kuri kukura neminiti.
Mundima dzese dzinotevera ticha ziva zvakadzama chii chinonzi Snapchat, chinoshandiswa sei, chingatipe uye ndeapi matanho akanakisa uye sarudzo dzauinadzo. Zvese kuitira kuti iwe udzidze maitiro ekuwana zvakawanda kubva muapp izvo kurova -uye yakasimba kwazvo- izvozvi. Ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga kubva mundima inotevera kana uchiri a noob maererano snapchatiles uye hautomboziva kuti iyo mhepo inokupa iwe kana kuti iwe unosvetukira kumusoro kune iyo inokunakidza iwe kana iwe uchinyatsoziva mairi. Kune nyonganiso.
1 Chii chinonzi Snapchat?
2 Ok, uye izvi zvinofanirwa kundifadza nekuti ...
3 Matanho ekutanga paSnapchat
4 Iva Snapchat nyanzvi
4.1 Rekodha pasina maoko.
4.2 Snapchat, ne uye mafirita
4.3 Nzira yekufamba
4.4 Chinja iro bhurasho ruvara
4.5 Shandisa mafirita maviri panguva imwe chete.
4.6 Tora mafirita kubva uko pasina
4.7 Tsvaga zvitupa nemashoko.
4.8 Ziva kana munhu wauri kutaura naye ari zvakare online.
5 Chii chinouya izvozvi
Chii chinonzi Snapchat?
Snapchat ndeimwe yeaya maficha ayo, pakutanga, anogona kuve akaoma kunzwisisa kuti yauya sei kusvika zvino. Oasis uko kwekusanyanyisa, kusakosha uye kupusa zvakabatanidzwa mune yekudyira yakakwana iyo inogona kumisa chero munhu nguva pfupi achangotanga. Iyo axis iyo yakavakirwa pairi ndeye ephemerality yezvinhu inoshandiswa kune zvemukati zvekuona, izvo chaizvo zvinoita kuti zvisiyane nezvimwe zvese. Izvo zvinoshandiswa zvinotipa mukana wekuisa zvirimo uye nekuzvigovana nemushandisi mumwechete zvakavanzika nzira, nevazhinji panguva imwe chete zvakaenzana zvakavanzika nzira, kana munzira yeruzhinji kuitira kuti vateveri vedu vese (izvi zvigone kugumira zvakavanzika marongero) anogona kumuona.
Nyasha ndeyekuti, mune zvakavanzika mameseji, izvo zvatinotumira - uye kugamuchira - zvinogona kungoonekwa kamwe chete uye uye izvo zvatinoburitsa munyaya yedu zvinongowanikwa kune vamwe vese kuti vaone kwemaawa makumi maviri nemana. Ndokuonekana bye. Izvo zvirimo zvaenda uye hazvife zvakadzoka. Pamusoro pezvo, uye kuwedzera icho chinhu chenguva pfupi, mavhidhiyo atinoisa anozove nehurefu hwakareba hwemasekondi gumi, ayo anopa zvinesimba uye zvinogumbuka zvemukati (uye, dzimwe nguva, mitsara yakatemwa nepakati).
Ok, uye izvi zvinofanirwa kundifadza nekuti ...
Sarudzo dzemushandisi (kuruboshwe) uye akasiyana midhijitari midhiya (kurudyi)
Nekuti inopa zvinopfuura zvinosangana neziso. Kiyi yekudzikisira kuti inogona kunetesa sei, sekune chero pasocial network yakakosha munyu wayo, iri mune vashandisi vaunotevera. Semutemo wenguva dzose, ruzhinji rwewako wenguva dzose mahofisi ekutaurirana anozoisa zvinonakidza zvemukati pazviitiko zvisingawanzo, vachizvisarudzira pakutumira zvinhu izvo zvisingaendi kana kuuya kwauri uye pasina kumwe kuenderera. Kunyange zvakadaro, kune maakaundi asingaverengeke anonakidza ayo anokupa iwe zvemukati nguva nenguva izvo zvaunowana kuve nenguva yekunakidzwa uye kudzidza chimwe chinhu kana chimwe. Kudzidza kusarudza kwakakosha zvikuru kana nguva yedu yave panjodzi, izvo zvinogona kuve zvakawanda kana tikagara tiri vashandisi veSpapchat.
Zvakare, pasocial network Isu tinopihwawo nzira dzekutsikisa dhijitari² uye kurarama zviitiko zvekutevera zvakarongedzwa neruoko nechikwata cheplatform. Nekuda kweizvi isu tinokwanisa kuwana zvirimo zvemukati izvo zvatisingakwanise kuwana chero kumwe kunhu uye nekuona zvimwe zvezviitiko zvikuru zvenguva zvakanyanya padhuze.
Matanho ekutanga paSnapchat
Yedu mushandisi profile (kuruboshwe) uye zvinonakidza maficha kuti aite (kurudyi)
Zvakanaka, kana ini ndakakwanisa kukukurudzira kuti ugozvipa kana mukana mumwe chete, inguva yekudzika pasi kuti ushandise kugadzirisa iyo app uye kutanga kushanda pairi. Chinhu chekutanga, chokwadika, chichava kutora Snapchat. Kamwe mukati, isu tinofanirwa kunyoresa uye sarudza zita redu rekushandisa. Pashure, Tinogona kumisikidza iyo GIF inozoratidzwa kune vamwe vashandisi pavanotitsvaga kuti tiwedzere uye izvo zvinoumba mhando ye "bhizinesi kadhi". Kuti tiite izvi, tinotsvedza pasi kubva kukamera skrini uye tinya pabhokisi yeyero ine chipoko, kwazvinotitorera titore nhevedzano yemifananidzo iyo ichazoberekazve.
Iwe watove a snapchatter pamwe. Nokusingaperi, iyo app inogara ichivhura kune iyo foto kana vhidhiyo log log. Kusvetukira kuruboshwe uchawana hurukuro dzako pachako. Kune kurudyi, nyaya dzeveruzhinji dzevanokutaurisa uye midhiya midhiya. Zvakareruka sekudaro. Kugovera mufananidzo kana vhidhiyo, ingo pfura kubva kukamera -one pombi yemifananidzo uye refu dhinda vhidhiyo- uye shandisa zvidhori pazasi kuti ugovagovana, kungave zvakavanzika (nemuseve uri kurudyi) kana nekuvawedzera kune yako Nhau (uchishandisa chiwere chine + chiratidzo). Izvi zvisati zvaitika, tinogona kuwedzera zvinyorwa, madhirowa uye emojis / zvitambi kubva kumabhatani ari kumusoro kurudyi. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa akateedzana mafirita anozoonekwa, kana tangogadzirira kutsikisa, nekufambisa chigunwe kuruboshwe kana kurudyi kwescreen. Mukati mavo tinowana akasiyana mavara gradients, mukana wekuisa mavhidhiyo mukukurumidza kana kunonoka kufamba ...
Imwe yesarudzo dzinonakidza dzeSnapchat ndeyekuti inotibvumidza kuti tivimbise kuti kana paine mumwe munhu kune zvese zvatinoburitsa zviri kusvika kwaari. Kana isu tikatumira zvemukati kushamwari - kana akati wandei- pakavanda, isu tinokwanisa kuziva kana meseji yedu yakavhurwa kana iyo icon inowoneka padivi payo kamwe yakatumira shanduko kubva kuzadza (kusingaonekwe) kuenda isina chinhu (yaonekwa). MuNhoroondo yedu, tinogona kuratidza zvese "zvimisikidzo" zvatakaisa, tichioneka padivi peumwe neumwe nhamba inoratidza huwandu hwevashandisi vakazviona. Kana isu tikabaya pane iyo icon inomiririra ziso, tichaona kuti ndevapi vashandisi vanga vachida kuziva.
Iva Snapchat nyanzvi
Contextual kutsvaga zvitambi mukukurukurirana kwega (kuruboshwe) uye kudhirowa uchishandisa nhema uye chena mavara (kurudyi)
Vanoti kuita kunogonesa, uye ichokwadi. Hazvibatsiri kuva neSpapchat kana iwe usingape kuenderera kune zvinyorwa zvako uye uchibata nenyaya dzinonakidza dzevateereri vako. Kunyange zvakadaro, kwete mazuva ese isu atinogona kupa yakakosha nguva yekutaurira chimwe chinhu chakakodzera kana, isu hatisi kungonzwa sekudaro. Nekudaro, izvo hazvireve kuti iwe haugone kutumira chero chinhu. Snapchat inotipa akasiyana mafirita uye zvitambi zvekusimbisa zvinyorwa zvedu uye kutyora kwavo monotony. Kuti tiratidze menyu yemafirita ehupenyu, tinofanirwa kumanikidza nekubata kumeso kwedu (kana isu tine kamera mune selfie mode) kana kumeso kwemumwe munhu. Yakapusa uye isina basa, mafirita aya akasimba anoshandira chinangwa chavo: kufadza muoni kune rimwe divi rekona. Uye zvakare, isu tinokwanisa kuwedzera zvitambi nekudzvanya pachivara chinowoneka kumusoro usati waburitsa mufananidzo kana vhidhiyo, ine chakakosha chimiro chekuti mumavhidhiyo izvi zvimiti zvinogona kufamba zvichitevera kuita kwevhidhiyo. Isu tinongofanirwa kusarudza iyo emoji kana chinamirwa uye tobatisisa pairi muchikamu chevhidhiyo yatiri kuda kuti ibatanidzwe, panguva iyoyo inozobatanidzwa mukurekodha kwedu.
Snapchat haina kukwana, ichi chinhu chatinozoona mukushandisa kwedu kwemazuva ese asi, iko kushanda kupi? Ehezve, seapp isina kukwana, Hatigone kudzivisa kupotsa zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuzvishandisa pane dzimwe nguva. Neraki, mazhinji acho anogona kugadziriswa nekutenda kune mashoma madiki "mapipi" ayo asingangogadzirise ruzivo rwedu neSpapchat, asi zvakare achasiya shamwari dzedu nemiromo yakavhurika. Ipapo vanoenda:
Rekodha pasina maoko.
Pasina kupokana imwe yeiyo nyeredzi inoshanda iyo vazhinji vangade kuona inosanganisirwa zviri pamutemo kukanganwa nezve kugara uchingobaya bhatani kana uchirekodha mavhidhiyo. Zvisinei, izvi hazvisi izvo zvakaoma kuita mazuva ano. Izvo zviri nyore sekugadzira chiito muAubatsira Kubata (tinogona kuivhura nekudzvanya katatu mumutsara pabhatani rekutanga kana muZvirongwa> Zvakajairika> Kugona kuwanika> Kubatsira Kubata) iyo inoteedzera muchina wekudhinda. Kuti uite izvi, zvinongodzvanya ubatisisa pachikwangwani chekunyoresa kana kutsanangura zvidiki-zvidiki-denderedzwa.
Kana tangonyoreswa, isu tinoshandisa iyo Inobatsira Kubata nekukurumidza kupinda kuburikidza nemabatiro ataurwa pamusoro uye tiende kuSnapchat, kwatinofanira kuiratidza uye sarudza sarudzo yatakachengeta neiyo refu denderedzwa yekudhindisa chiratidzo (iri mukati mekoni nyeredzi). Isu tinosarudza uye tinayo pamusoro peiyo Snapchat vhidhiyo rekodhi bhatani, panguva iyoyo isu tichatanga kuona kuti kurekodha kunotanga sei otomatiki.
Snapchat, ne uye mafirita
Zvese zvinhu zvinotenderera nekugovana nguva, nekudaro, zvichibva nekuti uripi panguva yaunorodha zvirimo, zvinogona kukupa mafirita akasarudzika zvichienderana nenzvimbo yako (chete kana paine mafirita akagadzirirwa nzvimbo iyoyo). Pamusoro pe, Mafirita akasarudzika anozoitwa pane dzimwe nhambo, senge zuva resarudzo dzekupedzisira muSpain muna Chikumi 26. Iyo nguva inoratidzwa zvakare (kana tikabaya pairi, inoshanduka kuita yemaitiro fomati), tembiricha uye kumhanya kwatiri kufamba. Kuti tiite izvi, tinoenda kuApp Zvirongwa> Mamwe masevhisi uye shandisa mafirita uye tambira mvumo dzenzvimbo.
Panzvimbo imwe chete mukati meZvisarudzo izvo zvatinoona mune yakapfuura poindi, zvinokurudzirwa kumisikidza mafambiro maitiro, izvo zvinotibvumidza isu kusevha pane yedu internet rate (nekuti Snapchat, kuwedzera kune yakawanda bhatiri, zvakare inoshandisa yakawanda data).
Chinja iro bhurasho ruvara
Patinodhirowa chimwe chinhu pane yedu yekurekodha kana mufananidzo tichishandisa chishandiso chekudhirowa, palette iyo yatapihwa kusarudza ndiyo inoratidzwa mubhawa kurudyi, asi uchisarudza ruvara ramba wakatsimbirirwa uye woenda kuruboshwe kwedu, tichaona kuti hunyoro hunodzikira sei musimba, Kusvikira iwe wasvika wakazara chena kuruboshwe kuruboshwe rwechidzitiro. Saizvozvowo, kana tikapeta pasi, vara rekupedzisira ratichawana ndere nhema.
Shandisa mafirita maviri panguva imwe chete.
Ndima shomanana pamusoro apa ndakakuudza kuti, kupururudza kuruboshwe uye kurudyi usati waburitsa chimwe chinhu, mafirita akasiyana uye sarudzo dzekushandisa pane edu zvirimo. Zvakanaka ipapo, Kana iwe ukasarudza imwe uye chengeta munwe wako pachiratidziro iwe nerumwe ruoko uchiramba uchipururudza kuruboshwe kana kurudyi, uchaona kuti iwe unogona kuwedzera yechipiri firita kwauri Snap (isa vhidhiyo mukufamba zvishoma uyezve kuratidza nguva, semuenzaniso).
Tora mafirita kubva uko pasina
Snapchat inotipa akateedzana mafirita emuvara ku "colorize" mifananidzo yedu kana mavhidhiyo, asi isu tingangoda kushandisa vara iri pane irwo runyorwa - izvo zvisina kunyanya kuoma-. Tinogona kuzvigadzirisa zviri nyore kusarudza emoji yeiyo chaiyo vara, uchiiwedzera kune yakapenga zviyero uye uchiiendesa kumucheto kwayo, nharaunda inozoratidzwa nerudzi rwekufemeruka nekuda kwekukura kukuru kwawakaiswa. Sezvo iri semitransparent, isu tinogona kuishandisa sefaera yeiyo yakasarudzwa ruvara.
Tsvaga zvitupa nemashoko.
Chimwe chezvinhu izvo isu zvatingade kuita nema emojis mune edu enguva dzose mameseji maapplication ndizvo izvo Snapchat yakaisa kune zvimiti zvekutaurirana kwepachivande. Ingo nyora izwi (muChirungu, hongu) riri mubvunzo kuitira kuti iwe ugone kutsvaga zvitupa zvine chekuita nazvo.
Ziva kana munhu wauri kutaura naye ari zvakare online.
Mukutaura kwega, tinogona kuziva kana munhu watiri kutaura naye ari kuverenga zvatiri kunyora panguva ino, emoji inonyemwerera inoonekwa kuruboshwe kuruboshwe rwekutaura Kana zvirizvo.
Isu tinovimba kuti panguva ino iwe unotoziva kuti chii chinonzi Snapchat uye kwete kungoziva mashandisiro eapp, asi kuti unogona kutanga kushandisa mamwe eaya "ekunyengerera ruoko rwako" ayo anozoita kuti uve nyanzvi kunyaya iyi. Rangarira, zvakadaro, chakakosha chinhu chiri mukati. Kubudirira papuratifomu yerudzi urwu hazvisi nyore, nekuti Zviri nyore kwazvo kuwira muhusimbe uye iyo "chero chinhu chinoenda" musungo. Vateereri paSnapchat vachadya zvirimo nekukurumidza uye zvakajeka, kana iwe uchifinhwa kana kuwira mune monotony, hapana munhu achazoda kushandisa yavo nguva kukuteerera. Uye kubvisa mumwe munhu kubva kune shamwari shamwari kunodhura zvishoma. Hazvibatsiri kushongedza mifananidzo yedu uye mavhidhiyo nemaruva kana iwo asinganyatsoburitsa chero chinhu. Pane zvinopesana, kana zvemukati zviri zvemhando yepamusoro uye uchizviibata nenzira inofadza, haungori nevateereri vakavimbika chete, asi uchawana vateveri vako kuti vakurudzire uye iwe unosvika kune yakakura mhando yevangangodaro vateveri.
Sezvo Snapchat isina chimbo chakadai kutsvaga vashandisi, Nzira yakapusa yekuwana vateveri vatsva ndeyekugovana mushandisi wedu pasocial network. Unogona kuzviita nyore nyore kuburikidza nekuwedzera kunopihwa neapp. Iwe uchaiwana mune Wedzera shamwari chikamu.
Chii chinouya izvozvi
Snapchat achangobva kuzivisa kuburikidza neazvino ekuvandudza kuuya kweMemories, chiitiko icho izvo zvichatibvumidza isu kuti tigadzire gallery pamwe nemavhidhiyo uye mifananidzo yatakamboisa kuapp, Zvichibvumira isu kwete kungova nezvose zvakanyatsorongeka, asi zvakare kuti tigovane zvekare nevatinosangana navo. Naizvozvi, zvemukati medu hazvichazonyangarika sepakutanga kwemaawa makumi maviri nemana, asi tinogona kuzvichengeta kuti tirangarire nguva nezvakaitika mune ramangwana. Iyo zvakare ine yekutsvaga nemazwi e vanoridza (zvakafanana nezvinamirwa mune zvega zvekutaurirana zvatakaona ndima shoma pamusoro) uye yekuyeuchidza makore edu mafoto nemavhidhiyo. Kana iwe uri mumwe wevaya vanotumira zvinokanganisa zvemukati, iri basa nyowani rinounza nesarudzo yekurichengeta pasi pepassword yakagadzwa nesu, kuti pasave neumwe munhu anogona kuiwana.
Saizvozvo, chimwe chezvinhu chisingafungidzike kusvikira mwedzi mishoma yapfuura mukushandisa senge Snapchat ichaitawo chitarisiko: iko kugona kurodha mifananidzo nemavhidhiyo kubva kune yedu iPhone foto reel. Kushamisika? Haisi yezvishoma. Pane chikuva panotepfenyura zviri kuitika panguva iyo chiitiko chinoitika chakakosha - kana zvaive, zvirinani-, zvichigonesa basa kuti rigone kugovana (kunyangwe muNhoroondo yedu!) Nguva dzekare idiki zvishoma pane kubaya kumukira.
Snapchat iri kutora nhanho hombe kuenda kumberi uye iri kutanga kuzvimisikidza pachayo seplatifomu yakasimba kwazvo inotorwa mukufungwa nevanhu vazhinji uye vazhinji. Munguva pfupi yapfuura, isu takatarisa Mutungamiriri weBritain, David Cameron, achidaidzira kuti 'gara' kuburikidza nechiitiko chaicho inoitirwa zuva rereferendamu muUnited Kingdom (brexit). Isu tiri pachena kuti chakanakira kunyorera ichi kuchiri kuuya, usachipotsa.
Pane chisarudzo chingatibvumidza kuti titarise zvakare meseji kuitira kana tashaya chimwe chinhu. Inoitwa nekutsikirira nekubatisisa meseji yatichangobva kuona.
Kunyangwe ivo vachiwanzowanikwa, kana tisingade kupotsa chero chinhu chinoburitswa nenhepfenyuro, tinogona kunyorera kumatanho nekuabatisisa. Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi ivo vanozooneka padyo nezviitiko zviripo.
³Chiratidzo chegirini chine miseve yakayambuka chinogona kuoneka, zvichireva kuti mumwe munhu abata chiya chiya. Kana tichida kuona kuti ndiani, tinya paziso. Zita rake rakasvibira richamupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Snapchat: iyo giraidhi yekuziva zvese nezve iyo app yenguva yacho
ehmm ini ndinofunga chitubu chauya chakanonoka ... iyi app yatanga kuve nekukosha kwakawanda uye kushandiswa kwakawanda pakati peavo vanodana milleniumus (kana chimwe chakadai) makore maviri apfuura.
Imwe pfungwa yakakosha ndiko kushanda kwakanakisa kunosanganisa kuputsa kwejeri kune ino app ne phanton ... isingaparadzanisike
Apple inosungirwa kushandisa carousel kuratidza yayo chigadzirwa mifananidzo pawebhu